Nnukwu Street Party nke Africa: Carnival Calabar na Nigeria
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ mkpakọrịta » Nnukwu Street Party nke Africa: Carnival Calabar na Nigeria
Akụkọ mkpakọrịta • Na-agbasa News Travel • Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ • nzukọ • Akụkọ Na -eme Nigeria • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Carnival Calabar nke Nigeria nwere ike gosiputara nke kacha mma na 2017, dị ka ATQ News si kwuo. Ha kwubiri na, n'agbanyeghị ụfọdụ njehie pụtara ìhè nke ndị na-ahazi mere, onye ọ bụla chọtara ụzọ isi nwee ọ andụ na ọ bụ ya mere ejị ahụ ji bụrụ nke ọma.
Maka oge mbụ, Carnival Calabar biri ndụ dị ka nzube ya si dị; Nnukwu Street Party nke Africa. Ememe nke afọ a abụghị ihe ngosi na ebe a na-eme oriri; Ọ bụghị ihe niile gbasara emume Carnival na mmiri, ọ bụ karịa ndị enyi na-apụta inwe ọ ,ụ, na-ezute ndị mmadụ dị iche iche ma na-erite uru n'elu ikpo okwu Carnival nyere ha ka ha bụrụ onwe ha, iji ejiji dịka ha chọrọ ma ghara iche na ọ dị egwu.
Ihe ngosi nke agba na ọdịbendị jupụtara na ndị nwere obi ụtọ na-agba egwu, uwe mara mma na egwu egwu. ATQ News / Idy Hyper Egba dere -
“Ike agwụla ndị ahụ. Ha enweghị ike ichere ka Gọọmentị mee Carnival Calabar nnukwu ọzọ. Ndị na-echekarị banyere ndị mmadụ jidere Carnival Calabar: "ndị mmadụ."